Gadhafi ဂါဒါဖီရဲ့မွေးရပ်ဌာနီ Sirte ” မြို့ စာတီ” ကို သိမ်းပိုက်တဲ့လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » Gadhafi ဂါဒါဖီရဲ့မွေးရပ်ဌာနီ Sirte ” မြို့ စာတီ” ကို သိမ်းပိုက်တဲ့လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ
Gadhafi ဂါဒါဖီရဲ့မွေးရပ်ဌာနီ Sirte ” မြို့ စာတီ” ကို သိမ်းပိုက်တဲ့လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ
Posted by Kyaemon on Jan 3, 2012 in Education, History, Society & Lifestyle |3comments
Autocrats DEMOCRACY Gadhafi Libya Sirte
Photos: The Seige of Sirte, Libya and the Killing of Gadhafi | Plog — World, National Photos, Photography and Reportage — The Denver Post
(ဂေဇက်ရွာသူရွာသားများ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရတဲ့အလား၊ လစ်ဗျားတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွဲတဲ့အလား၊
ရင်ခုန်စရာ သနားစရာ ရင်နင့်စရာ သင်ခဏ်းစာယူစရာ တွေ မလွဲမသွေ  တွေ့မြင်ခံစား ရမှာ ပါ)
Gadhafi ဂါဒါဖီရဲ့မွေးရပ်ဌာနီ Sirte ” မြို့ စာတီ” ကို သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဟာတော်တော်ပြင်းထန်ပြီး
"နိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်" နဲ့ရက်တွေ တော်တော်ကြာခဲ့တယ်၊
Libya လစ်ဗျားသူပုန်တွေက NATO နာတိုစစ်လေယာဉ်များနဲ့ ဗုံးကြဲခိုင်း တိုက်ခိုက်ခိုင်း ခဲ့ရတယ်၊
Gadhafi ဂါဒါဖီ အစိုးရပြုတ်သွားခဲ့သော်လည်းဘဲ နောက်နှစ်လကြာမှနောက်ဆုံးစခန်းဖြစ်တဲ့ Sirte စာတီမြို့ကို သိမ်းပိုက်နိုင်တော့တယ်၊
“Middle East” ခေါ်တဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ “အာရပ်တော်လှန်ရေး” ဟာ (ဒီမိုကရေစီဟန်ပြ) အာဏာရှင်တွေကို မကြိုက်ကြဘဲ
ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး(အစစ်အမှန်)ကို ပိုမိုတောင်းဆို လာကြတယ်၊
ယင်းဒေသမှ ပြုတ်ကျ သေဆုံး ရတဲ့အာဏာရှင်ဆိုရင် ဂါဒါဖီဟာ ပဌမဦးဆုံး ဖြစ်တယ်
Interim government officials said one of Gadhafi’s sons, his former national security adviser Muatassim, was also killed in Sirte and another, one-time heir apparent Seif al-Islam, was wounded and captured. (later found that this news is not true)
This gallery contains graphic content including photographs of dead bodies
လစ်ဗျား က တိုင်းသူပြည်သားတွေ အဲဒီလို သွေးစည်းညီညွတ် ကြတာ ကို အားကျပါ၏
အင်း. တနေ့ တော့ စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာထပ်သိမ်းအုန်းမယ်ထင်တယ်။
သူတို့ ထဲမှာလဲ အကွဲကွဲ တွေနဲ့ ပါ။စစ်အာဏာရှင်တွေကို နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးမှာ